Vacuum inotonhorera Vagadziri & Vatengesi - China Vacuum inotonhorera Fekitori
Zvikafu zvakabikwa Vacuum Nzvimbo
Yakagadzirira Chikafu Inodziya Inotonhorera Pfupi Tsanangudzo
Iyo tekinoroji yakavakirwa pane zvinoitika zvekuti mvura inotanga kufashaira pakadzika tembiricha sezvo kumanikidza kudzikira. Muchivharo chinotonhorera kumanikidza kunodzikiswa kusvika padanho remvura parinotanga kufashaira. Semhedzisiro, chikafu chinogona kutonhodzwa pasi kuburikidza nekudzikisa kumanikidza mukamuri yekutsvaira.
Nenzira iyi, chikafu chakabikwa chinogona kutonhodzwa pasi kubva patembiricha yakakwira kusvika pa10 ℃ mukati me20 ~ 30min, chikafu chakabikwa chinogona kutonhodzwa pasi kubva patembiricha yakakwira kusvika pa20 ℃ kusvika pakakomberedzwa mukati me10-20min.
Makomputa Vacuum Nzvimbo
Tsananguro ye Vacuum inotonhorera
Vacuum kutonhora inzira yakanaka yekutonhodza chaiyo maMakompositi, anoshanda nekukasira kubuda kwemvura kubva kune mamwe manyowa pasi pekumanikidza kwakadzika kwemhepo mukati meimba yemuchina. Simba riri muchimiro chekupisa rinodiwa kuti uchinje mvura kubva pane mvura kuita mamiriro emhute sekubika kwemvura. Pakuderedzwa kwemhepo mumhepo mune yekuvharira imba yemvura mamota pane yakaderera pane yakajairwa tembiricha.
Maruva Vacuum Nzvimbo
Vacuum kutonhora inzira yakanaka yekutonhodza yakatemwa nyowani maruva akachekwa, anoshanda nekukasira kubuda kwemvura kubva kune mamwe maruva pasi pesimba rakadzika remuchadenga mukati mekamuri yekuzorora. Simba riri muchimiro chekupisa rinodiwa kuti uchinje mvura kubva pane mvura kuita mamiriro emhute sekubika kwemvura. Pakuderedzwa kwemhepo mumhepo mune yekuvharira imba yemvura mamota pane yakaderera pane yakajairwa tembiricha.
Vacuum kutonhora inzira yakanaka yekutonhodza chaiwo mahebhu, anoshanda nekukasira kubuda kwemvura kubva kune mamwe mahebhu uye turu pasi pesimba rakadzika remuchadenga mukati mekamuri yemuchina. Simba riri muchimiro chekupisa rinodiwa kuti uchinje mvura kubva pane mvura kuita mamiriro emhute sekubika kwemvura. Pakuderedzwa kwemhepo mumhepo mune yekuvharira imba yemvura mamota pane yakaderera pane yakajairwa tembiricha.
Vacuum kutonhora inzira yakanaka yekutonhodza chaiyo howa, inoshanda nekukurumidza kubuda kwemvura kubva kune imwe howa pasi pekumanikidzika kwakanyanya kwemhepo mukati meimba yemuchina. Simba riri muchimiro chekupisa rinodiwa kuti uchinje mvura kubva pane mvura kuita mamiriro emhute sekubika kwemvura. Pakuderedzwa kwemhepo mumhepo mune yekuvharira imba yemvura mamota pane yakaderera pane yakajairwa tembiricha.
Vacuum kutonhora inzira yakanaka yekutonhodza chaiyo turfs, inoshanda nekukurumidza kubuda kwemvura kubva kune mamwe turfs pasi peakadzikira emuchadenga kumanikidza mukati meye vacuum chamber. Simba riri muchimiro chekupisa rinodiwa kuti uchinje mvura kubva pane mvura kuita mamiriro emhute sekubika kwemvura. Pakuderedzwa kwemhepo mumhepo mune yekuvharira imba yemvura mamota pane yakaderera pane yakajairwa tembiricha.
Chii Chinonzi Kutonhorera?
Nhanho 1: Kupora unyoro kubva mukati mechigadzirwa.
Nhanho 2: Inobvisa simba muchimiro chekupisa kubva kune nyowani inogadzira.
Nhanho 3. Ita kuti pamusoro uye musimboti wechigadzirwa usvike chaizvo iyo
tembiricha imwe chete mushure mekupembera kwemhepo.
Steam Chikafu Inodziya Inotonhorera Pfupi Tsanangudzo
Muriwo Vacuum unotonhorera
Vacuum kutonhora tekinoroji kwakasiyana neyakajairwa firiji michina, iri inotonhorera yekugadzirisa michina, ine inokurumidza, yunifomu uye yakachena kutonhora zvakanakira. Iko kudzikiswa kwetembiricha kuburikidza nevhavha inotonhorera kunowanikwa nekukurumidza kubuda kwemvura kana iwo mhepo yemuchadenga mukati mekamuri inoderedzwa nepombi yepombi. Kazhinji, zvinotora maminetsi makumi matatu chete kuti usvike pane yakakwana yekuchengetedza tembiricha ingangoita mashanu madhigirii.